स्पेनमा सबैभन्दा सुन्दर महलहरू | यात्रा समाचार
कस्तो चयन! सत्य यो हो कि यसको सूची बनाउन धेरै खर्च हुन्छ स्पेनमा सब भन्दा सुन्दर महल... धेरै धेरै छन्! र कुन मापदण्डको साथ हामी तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्दछौं, हैन? यस विषयको बारेमा राम्रोसँग सोच्न म मध्य युग र मध्ययुगीन कल्पनाहरूको लागि मेरो प्रेमले झुकाएको छु।
त्यसोभए, मैले महलहरू चयन गरेको छु जुन परी कथाबाट बाहिरको जस्तो देखिन्छ तर चम्किरहेको कवच र राजकुमारीहरू टाउकोमा टोपी लगाएर। कडा, विशाल उपस्थिति को महल, सिद्धान्त मा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ र अभ्यासमा होईन। यो हुन सक्छ कि तपाईं मेरो चयन मेल खाने?
मैले पहिले स्पष्ट गरे कि यो एक होईन शीर्ष दस वा त्यस्तो जस्तो कुनै पनि तिनीहरूलाई प्राथमिकता, उमेर, शैली वा सौन्दर्य को क्रम मा व्यवस्थित छन्। त्यो भन्यो, हामी हाम्रो पहिलो कथा महलबाट शुरू गर्छौं, यो हो सेगोभियाको अल्काजार। यो अवस्थित छ जहाँ Clamores उपत्यका र Eresma उपत्यका मिल्छ र यो वास्तवमै प्रभावशाली छ।
समयका साथ बिभिन्न शाही घरहरूले यसलाई आकार दिएका छन् र यसलाई जानिन्छ किल्ला, शाही दरबार, जेल, तोपखाना कलेज र आज ऐतिहासिक संग्रह सैन्य। यो विश्वास गरिन्छ कि यसको जग रोमन कालको हो, यद्यपि यो १२ औं शताब्दीमा महलको रूपमा देखा पर्‍यो।
Es स्पेनमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको महलहरू मध्ये एक र यो सेगोभियाको पुरानो शहरको मुटु हो, १ 1985 XNUMX पछि विश्व विरासत साइट।
यो एक थियो कास्टाइलका राजाहरूको मनपर्ने निवास र यो एक धेरै विलासी निवास भएको थियो। महत्वपूर्ण घटनाहरू जस्तै फिलिप द्वितीय वा उठेको एलिजाबेथ क्याथोलिक को घोषणा। यो पूर्ण महल हो: होमाजको एक टावरको साथ, एक ड्राब्रिज, खन्न, एक चैपल र आँगन। यो पहाडमा खडा छ र यसको आन्तरिक भागमा आज सैन्य ऐतिहासिक अभिलेख र एक रोचक हतियार संग्रहालय पनि छ।
यो छ बिभिन्न खुल्ने समय गर्मी वा जाडोमा। अप्रिल र अक्टुबर बीच बिहान १० देखि pm बजे सम्म खुल्छ र नोभेम्बर र मार्च बिच यो साँझ 10 सम्म खुला रहन्छ। यो बन्द हुनुभन्दा आधा घण्टा सम्म प्रवेश गरिएको छ र केहि दिनहरू यो क्रिसमस हव्वा, क्रिसमस, डिसेम्बर ,१, जनवरी 8 वा अलकाजारको दिन बन्द हुने गर्दछ।
यो प्रस्ताव गर्दछ ticket यूरोमा पूर्ण टिकट, अर्को केवल the.5० यूरोमा दरबार र संग्रहालयको भ्रमण गर्ने र तेस्रोको २. at० यूरोमा ज्वान द्वितीयको टावर मात्र भ्रमण गर्ने।
अर्को प्रभावित मध्यकालीन महल, शुद्ध ढु stone्गा र गोल र चुनौतीपूर्ण टावरहरू बाट बनेको हो, हो Jarandilla de la Vera को महल। छ Extremadura मा मुस्लिम मूलको शहरमा, सेक्रेस प्रान्तमा। यस्तो देखिन्छ कि यसको उत्पत्ति १ XNUMX औं शताब्दीको हो र यद्यपि यो एक विलासी महल होइन तर पर्याप्त छ austere यो उल्लेखनीय छ।
यो आयताकार र सममित आकारको छ, केन्द्रीय आँगनको साथ, र यद्यपि यसले यसको केही मूल आकार गुमाएको छ, यसले अझै मुख्य ढोकाको सीमको अगाडि टावरहरू राख्दछ र यो मानिन्छ कि यसमा ड्रब्रिज छ।
टोर्रे डेल होमेनेजे एकदम अग्लो छ, बाँकी महलको माथि ठाँउमा, र कर्निसले ताज लगाएको छ यद्यपि यसको लडाईँ छैन। यद्यपि यसको शताब्दीहरू छन् र मैले माथि भनें, जाराण्डिलाको महलले आज यसका परिमार्जनहरू पार गरिसकेको छ यो प्याराडोर Nacional de Turismo कार्लोस I को रूपमा प्रयोगमा छ। यसमा निदाउन सक्षम हुनुको साथै, तपाईं यसलाई भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईं फोन वा ईमेल मार्फत कुराकानी गर्न सक्नुहुने सबै कुराको तालिका बनाउन चाहनुहुन्छ भने।
El पोन्फरडा महल लियोन प्रान्तमा छ, कास्टिल्ला वाई लियोनमा, सिल र बोइजा नदीहरूको संगममा पहाडमा। यसको सेल्टिक उत्पत्ति छ र यो विश्वास गरिन्छ कि रोमीहरू र भिजिगोथहरू यहाँबाट पनि गए। पोन्फरडा प्रसिद्धलाई दिइयो नाइट्स टेम्प्लर लेनको फर्नांडो दोस्रो द्वारा, तर समय पछि अल्फोन्सो नवौंले अस्थायी रूपमा पछि शहरको लागि हटाउँछ, जब अर्डरको प्रयास गरिन्छ, मास्टरद्वारा लेनको मुकुटमा फिर्ता पठाउन।
महलको उत्तरी भाग १२ औं शताब्दीको हो र बाँकी १ the औं शताब्दी र पछि हो। एक छ महान टेम्पलर विरासतखास गरी पासेओ डे रोन्डा, बार्बिकन र टावरहरूमा। त्यहाँ एक परेड मैदान र एक सुन्दर Torre डेल होमेनेजे छ। मध्ययुगीन समयमा यो स्पेनको यस भागको सब भन्दा महत्वपूर्ण गढीहरू मध्ये एक थियो र सैन्य वास्तुकलालाई प्रेम गर्नेहरूका लागि अन्धकारमा छोड्न नसकिने महल थियो।
पोन्फरडा महल सोमबार देखि आइतवार बिहान १० देखि बेलुका २ र बेलुका to देखि from सम्म महिनाको अन्त्यसम्म खुला रहन्छ। नोभेम्बर र डिसेम्बर बीच यो सोमबार बन्द हुन्छ र घण्टा विभाजित पनि छ। यो आइतबार दिउँसो पनि बन्द छ। सामान्य प्रवेश शुल्कeयूरो।
उस्तै शैलीमा, विशाल गढीको, छ वाल्याडोलिडमा ला मोटाको महल। यसको उत्पत्ति एक रक्षात्मक निर्माणको हो, यद्यपि यसले अभिलेख र जेलको रूपमा पनि काम गर्‍यो। यसको दुईवटा भित्ता, आन्तरिक र बाहिरी, दुई पहुँच पुल, एकल ड्रब्रिज, र क्याथोलिक राजाहरूका पाखुराको कोटको एक आर्कसहित ट्र्यापेजोइडल आकार छ। योसँग गहिरो खाई, पाँच टावरहरू, एक छ होमेजको टावर oma० मिटर अग्लो र एक परेड मैदान।
आज यसका धेरै कुनाहरू भ्रमणका लागि खुला छन्। को निर्देशित भ्रमण यसले बाह्य, परेड मैदान, चैपल र जुआन डे ला कोसा कोठा समावेश गर्दछ। गर्मीमा यो बिहान ११ देखि दिउँसो २ र साँझ 11 देखि from सम्म खुल्छ, र आइतवार र छुट्टीहरूमा बिहान ११ देखि बेलुका २ बजेसम्म खुला रहन्छ। जाडोमा यो एक घण्टा अगाडि बन्द हुन्छ।
यो यात्रा नि: शुल्क हो, यद्यपि मार्गनिर्देशित भ्रमणमा फलाम युग र भूमिगत गैलरीको पुरातात्विक साइट पनि सामेल छन्। यसको लागतeयूरो छ। साथै टोरे डेल होमेनाजेको भ्रमण।
El लोअरे क्यासल हुन प्रतिष्ठित छ स्पेनमा सब भन्दा राम्रो संरक्षित मध्ययुगीन महल। यसका तीन भागहरू छन्, भुईं फ्लोर, पहिलो फ्लोर र दोस्रो। त्यहाँ एउटा चर्च, कोठाहरू, गुम्बा, परेड मैदान, एक टोर्रे डेल होमेनाजे र अर्को टोरे डे ला रेना, एक हतियार कोठा, एक क्रिप्ट र भित्ताहरू छन्।
त्यहाँ छन् महलले प्रस्ताव गरेका धेरै गतिविधिहरू: मध्ययुगीन टूर्नामेन्टहरू, व्याख्यात्मक ट्रेल्स, खजाना नक्शा, महलको आँफुलीको पुनःनिर्माण, र अधिक।
प्रस्तुत छन् चार भाषाहरूमा अडियो गाईडहरू (१,1० यूरोमा), त्यहाँ नि: शुल्क कार पार्क, एउटा स्मारिका पसल, एक क्याफेटेरिया ग्लेज्ड टेरेस र अडियोभिजुअल कोठा छ। महलको गाईड टुरहरू दिनभर धेरै पटक वर्षभरि प्रस्तुत गरिन्छ। तिनीहरू अधिक वा कम एक घण्टा टिक्दछन् र तपाईं आरक्षण अनलाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। सामान्य टिकटको लागत,, 4० यूरो र निर्देशित टूर 50 यूरोको साथ।
केवल यी केही महलहरूलाई नाम दिदै स्पेनमा सब भन्दा सुन्दर महल यो थोरै अनुचित हो, तर सूचीहरू ती धन्यवादी छन्। कोस्टा ब्राभामा टोसा डे मार, अलारकन क्यासल, पेफिएल क्यासल, ओलिट क्यासल, कोका क्यासल, अलहाम्ब्रा, ग्रेनाडा, लोर्का क्यासल, बेलमोन्ट क्यासल, समय र ठाउँको कारणले छोडियो। बेलभर, मिरावेट र अन्य धेरै। तीव्र, कठोर, अधिक सुरुचिपूर्ण, अधिक विलासी। स्पेनमा सबै प्रकारका महलहरू छन् त्यसैले यदि तपाईंको गन्तव्य यो देश इबेरियन प्रायद्वीपमा हो भने, आफ्नो मार्गलाई राम्ररी ट्रेस गर्नुहोस् ताकि एउटा छुटेन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » स्पेनमा सब भन्दा सुन्दर महल